Raspberry Pi Pico: အသေးစိတ်ဖော်ပြချက်များနှင့်အင်္ဂါရပ်များ | အခမဲ့ဟာ့ဒ်ဝဲ
Raspberry Pi Pico: အသေးစိတ်ဖော်ပြချက်များနှင့်အင်္ဂါရပ်များ
Raspberry Pi Pico Raspberry Pi Foundation မှဒီဇိုင်းပြုလုပ်ထားသော microcontroller ဘုတ်အသစ်တစ်ခုဖြစ်သည်။ ထုတ်ကုန်အသစ် ရှိပြီးသားသူတွေကိုချိတ်ဆက် နှင့်ပိုပြီးတူ၏ Arduino တစ် ဦး SBC ထက်။ ထို့အပြင်၎င်းသည်လူတိုင်းကိုအံ့အားသင့်စေသည့်နောက်ထပ်ကြီးမားသောအံ့အားသင့်စရာတစ်ခုဖြစ်ပြီး၎င်းသည်၎င်း၏အရွယ်အစားသေးငယ်ခြင်း၊ ခမ်းနားသောစွမ်းအင်ထိရောက်မှု (သို့) ၄ ဒေါ်လာသာစျေးနှုန်းထက်ကျော်လွန်သွားသည်။
ပြီးတော့ Raspberry Pi ဖောင်ဒေးရှင်းကအနည်းဆုံးခဏတော့သူ့ကိုယ်ပိုင်ချစ်ပ်ကိုဒီဇိုင်းရေးဆွဲပြီးယိုယွင်းနေပြီ။ အကြောင်း RP2040 SoC။ ဆိုလိုသည်မှာဤအချိန်သည်၎င်းတို့သည်အခြားဘုတ်များကဲ့သို့ Broadcom ချစ်ပ်များကိုမသုံးခဲ့ကြဘဲ၎င်းတို့ကိုယ်တိုင်ပြုလုပ်ခဲ့သည်။ အနာဂတ်၌သူတို့သည်အခြားပန်းကန်များ၌အလားတူလမ်းကြောင်းအတိုင်းလိုက်နာမှုရှိ၊
2 Raspberry Pi Pico ဘုတ်အဖွဲ့အကြောင်း
El RP2040 သည် Raspberry Pi Foundation မှဒီဇိုင်းထုတ်ထားသောပထမဆုံးချစ်ပ်ဖြစ်သည်။ စက်ရုံ၊ စက်မှုလုပ်ငန်း၊ မော်တော်ကား၊ ဆေးဘက်ဆိုင်ရာအသုံးအဆောင်များ၊ ရာသီဥတုစတာများစသည်တို့တွင်ထည့်သွင်းထားသောသို့မဟုတ်ထည့်သွင်းထားသောအပလီကေးရှင်းများကဲ့သို့သောအရွယ်အစားနှင့်စားသုံးမှုအရေးကြီးသည့်စီမံကိန်းများအတွက်ဒီဇိုင်းဆွဲထားသည်။
အခြားမီဒီယာများ (အရေးကြီးသော၊ ဂုဏ်သိက္ခာရှိသောအချို့သောသူများပင်) ဆိုသည့်တိုင်၎င်းသည်၎င်းတို့မှထုတ်လုပ်ထားသောချစ်ပ်တစ်ခုမဟုတ်ပါ။ ကျွန်ုပ်တို့၏ကိုယ်ပိုင်အဖွဲ့မှဒီဇိုင်းရေးဆွဲသော SoC သည် ASICs များ နှင့်ဤ IC ဖြစ်ပေါ်ခဲ့သည်။
ဆိုလိုသည်မှာ၎င်းတို့သည် IDM သို့အသွင်ပြောင်းခြင်းမခံခဲ့ရသော်လည်း၎င်းတို့၏ဒီဇိုင်းကိုစက်ရုံသို့ထုတ်လုပ်ရန်ဒဏ္fာရီပုံပြင်များသာဖြစ်သည်။ TSMC။ ဤစက်ရုံများတွင် ၄၀nm လုပ်ငန်းစဉ်ကို ၄ င်းတို့၏ထုတ်လုပ်မှုအတွက်အသုံးပြုသည်။ ဟုတ်ကဲ့၊ ၎င်းသည်အတော်အတန်မူလတန်းဟုထင်ရလောက်သော node တစ်ခုဖြစ်သည်၊ သို့သော်ထိုပုံသဏ္technologyာန်နည်းပညာသည်ဤစီမံကိန်းအတွက်လုံလောက်ရုံသာမက၎င်း၏လုပ်ငန်းကိုကောင်းစွာလုပ်ဆောင်နိုင်ပါသည်။
Raspberry Pi Pico ကိုအသုံးပြုထားသော rp2040 SoC ၏ဒီဇိုင်းကိုပြန်သွားသောအခါ၎င်းသည် Core များကို scratch မှဒီဇိုင်းမထားသော်လည်း၎င်းသည် Arm's IP cores ကိုအသုံးပြုရန်ရွေးချယ်ခဲ့သည်။ အထူးသကအသုံးပြုခဲ့သည် နှစ်ခု ARM Cortex M0 + 133Mhz မှာအလုပ်လုပ်။ ထို့အပြင်၎င်းတွင် 264 KB RAM နှင့် 2MB Flash တို့ပါ ၀ င်သည်။
အားလုံးသည်အခြား SBC board များတွင်ကဲ့သို့ Linux (သို့မဟုတ်အခြားသူများ) ကဲ့သို့သော operating system ကို run ရန်မရည်ရွယ်သော်လည်း Raspberry Pi Pico သည်သာဘာသာစကားနှင့်ရေးသားထားသောပုံကြမ်းများသို့မဟုတ်ပရိုဂရမ်များကိုသာ run နိုင်သည်။ ကို C / C ++ သို့မဟုတ် MycroPython။ ၎င်းတို့ကိုသင်၏ PC ပေါ်တွင်ရေးသည်နှင့်တစ်ပြိုင်နက်၎င်းတို့သည် MCUS ယူနစ်သို့မဟုတ်မိုက်ခရိုထိန်းချုပ်သူမှ၎င်းတို့ကိုဘုတ်အဖွဲ့သို့ microUSB မှတစ်ဆင့်လွှဲပြောင်းနိုင်သည်။
နောက်ဆုံးအနေနဲ့ငါဘေးဖယ်ထားချင်မှာမဟုတ်ဘူး အဆိုပါ nomenclature RP2040 ဆိုတဲ့နာမည်ကသူ့ရဲ့အကြောင်းပြချက်ရှိတယ်ဆိုပါစို့။
RPRaspberry Pi ကိုဆိုလိုသည်
2: Core ၏နံပါတ်။
0: core ကိုအမျိုးအစား (M0 +) ။
4: log2 (RAM ကို / 16kB) ။
0: log2 (မတည်ငြိမ်သောသို့မဟုတ် flash / 16kB)၊0ရှိပါက၎င်းသည်ဘုတ်ပေါ်မှဖြစ်သောကြောင့်ဖြစ်သည်။
၎င်းသည်မိုက်မဲပုံရသည်။ အထူးသဖြင့်ယခုအချိန်တွင်၎င်းတို့မှဒီဇိုင်းထုတ်ထားသည့် SoC တစ်ခုသာရှိသည်ဟုထည့်သွင်းစဉ်းစားခြင်းဖြစ်သည်။ သို့သော် Raspberry Pi Foundation သည်အရိပ်အမြွက်ပြောဆိုနိုင်သည် အနာဂတ်တွင်ပိုမို SoCs ဒီဇိုင်း...
ပိုမိုသိရှိလိုပါက - ဒေတာစာရွက် RP2040
Raspberry Pi Pico ဘုတ်အဖွဲ့အကြောင်း
အသစ်ပန်းကန် Raspberry Pi Pico အရွယ်အစားသေးသော်လည်းနှစ်သက်ဖွယ်ကောင်းသောအံ့သြဖွယ်ရာများကိုပြုလုပ်သည်။ ၎င်းသည်စျေးကွက်ထဲမှ ၄ ဒေါ်လာသာသာရှိသောကြောင့်၎င်းသည်ဈေးကွက်တွင်စျေးအသက်သာဆုံး microcontroller board များထဲမှတစ်ခုဖြစ်သည်။
ယင်းကြောင့် နည်းပညာဆိုင်ရာဝိသေသလက္ခဏာများနှင့်သတ်မှတ်ချက်များ, ဒီမှာပန်းကန်၏အသေးစိတျအပေါငျးတို့သ:
SoCRP2040 ကိုယူကေတွင် Raspberry Pi Foundation ၏ ASIC ဒီဇိုင်းလုပ်ငန်းအဖွဲ့မှဒီဇိုင်းထုတ်သည်။
DualCore ARM Cortex-M0 + 133Mhz အထိတက်ကြွသောနာရီကြိမ်နှုန်းနှင့်အတူ။
SRAM မှတ်ဉာဏ်၏ 264 kB
On-board flash memory 2MB ။
ConexiónUSB 1.1 Host အတွက်အထောက်အပံ့ပေးထားသော microUSB
ပရိုဂရမ်မာ C / C ++ နှင့် MicroPython ကဲ့သို့သောဘာသာစကားများကို အသုံးပြု၍ ဆွဲယူပါ။
GPIO: 26-pin ကိုဘက်စုံသုံး
အခြားတံသင်2x SPI, 2x I2C2x UART၊ 3x 12-bit ADC၊ ၁၆x လိုင်းများ PWM.
ပိုပြီးအပူချိန်အာရုံခံကိရိယာ၊ အမြန်ရေပေါ်အချက်ပြစာကြည့်တိုက်များနှင့်အရံပစ္စည်းများကိုထောက်ပံ့ရန်ဘုတ်ကိုလိုက်လျောညီထွေဖြစ်စေရန် 8x PIO (Programmable I / O) စသည်တို့ဖြစ်သည်။ ဥပမာအားဖြင့်၊ PIO နှင့် VGA၊ အသံ၊ SD ကဒ်ဖတ်စက်စသည်တို့စသည်တို့ကိုပြုပြင်ပြောင်းလဲနိုင်သည်။
စြေး:4$ (မဝယ်)
Raspberry Pi Pico အသစ်ကိုသင်၏ပရောဂျက်များအတွက်ဘာသာစကားတစ်မျိုးသို့မဟုတ်အခြားဘာသာစကားတစ်ခုခုကိုသင်အသုံးပြုလိုလားခြင်းအပေါ် မူတည်၍ C / C ++ SDK သို့မဟုတ်တရားဝင် MicroPython port ကို အသုံးပြု၍ စီစဉ်သည်။ ထို့အပြင် program ကိုအလွယ်တကူတင်နိုင်သည်
ဘုတ်ပေါ်ရှိ BOOTSEL ခလုတ်ကိုနှိပ်ခြင်းအားဖြင့်ဖြစ်သည်
microUSB cable ကို PC နှင့်ချိတ်ဆက်ခြင်း (Linux, Windows သို့မဟုတ် macOS, သင် Raspberry Pi4မှပင်ပရိုဂရမ်ပြုလုပ်နိုင်သည်)
ထိုအခါ BOOTSEL ခလုတ်ကိုလွှတ်လိုက်ပြီးပီအက်စ်ပီသည် RPI-RP2 ဟုခေါ်သည့်ယူနစ်အသစ်ကို Pendrive တစ်ခုကဲ့သို့တပ်ဆင်လိမ့်မည်။
ယခုသင် UF2 ကုဒ်ဖိုင်ကို memory unit သို့ဆွဲတင်လိုက်ရုံသာရှိပြီး၎င်းသည် load လိမ့်မည်။
Raspberry Pi Pico သည် reboot လုပ်ပြီး program ကိုစတင်မည်။
ထို့အပြင်သင်၌လည်းရှိသည် ဖိုင် ယူနစ်အတွင်းရှိ INDEX.HTM နှင့်၎င်းသည် Raspberry Pi ဝက်ဘ်ဆိုက်ပေါ်တွင်တရားဝင်စာရွက်စာတမ်းများကိုပြလိမ့်မည်။ အခြား INFO_U2F.TXT ဖိုင်တွင်ဘွတ်ဒ်ဗားရှင်းကဲ့သို့သောဘုတ်အဖွဲ့အကြောင်းအချက်အလက်ပါရှိသည်။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - အခမဲ့ဟာ့ဒ်ဝဲ » Raspberry Pi » Raspberry Pi Pico: အသေးစိတ်ဖော်ပြချက်များနှင့်အင်္ဂါရပ်များ
စစ်ဆင်ရေးအသံချဲ့စက် - ကဘာလဲ?
ATECC608: Raspberry Pi အတွက်လုံခြုံရေး module တစ်ခု